Mac တွင်ဖန်သားပြင်များမည်သို့ရိုက်ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
Mac ပေါ်မှာ screenshots တွေဘယ်လိုယူမလဲ
Nacho | | Mac OS X ကို, လဲ tutorial
ရှိပြီးသား OSX အသုံးပြုသူများကိုသတိပေးရန်နှင့်ဆရာဆရာမအသစ်ပြောင်းရန်အချိန်ရောက်လာပြီ Mac ပေါ်မှာဘယ်လိုရိုက်ကူးရမလဲ။ ပန်းသီးလည်ပတ်မှုစနစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာဖန်သားပြင်များကိုရိုက်ကူးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအပြည့်အ ၀ ရှိပါတယ်။
မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်းသည်ပုံမှန်အလုပ်များဖြစ်သည် ဆရာများ၏ထင်မြင်ချက်များသည်တင်ဆက်မှုများနှင့်ပိုမိုအလုပ်များသည်၊ ကျောင်းသားများအတွက်မှတ်စုများကိုဖန်တီးပါသို့မဟုတ်သင်ယူမှုပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်၎င်းတို့အတွက်လုပ်ငန်းတာဝန်များရေးဆွဲသည်။ ရုပ်ပုံများ၏ထောက်ခံမှုဖြင့်ဤမာလ်တီမီဒီယာစာသားပစ္စည်းများဖန်တီးရန်အထောက်အကူပြုသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြတင်းပေါက်တစ်ခု၊ မျက်နှာပြင်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု (သို့) မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံး၏စခရင်ရိုက်ကူးမှုကိုပြုလုပ်လိုသည်ဖြစ်စေ၊ သင်သိထားသင့်သည့်ကွဲပြားသောကီးဘုတ်ပေါင်းစပ်မှုများနှင့်အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ ဒီသင်ခန်းစာပြီးသွားရင်သင်ဟာကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီး OS X မှာပါ ၀ င်တဲ့ဒီအစွမ်းထက်တဲ့ကိရိယာကိုဘယ်လိုသုံးရမယ်ဆိုတာသေချာပါတယ် Mac ပေါ်တွင်မျက်နှာပြင်ပုံနှိပ်ခြင်း။
2 OS X မျက်နှာပြင်၏သီးခြားနေရာတစ်ခုကိုဖမ်းယူပါ
3 OS X တွင်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုဖမ်းယူပါ
4 Timer မျက်နှာပြင်ရိုက်ယူပါ
5 Mac ပေါ်ရှိ screenshots များနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်နောက်ထပ်အရာများ
မသန်စွမ်း Mac မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးကိုဖမ်းယူနိုင်သည် မည်သည့်ဇုန်ကိုမဆိုဖယ်ထုတ်ခြင်းမပြုဘဲ၊ ဤလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်မည့်သော့ချက်ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုရှိသည်။
Command (cmd) + shift key (Shift) + 3
ထိုဖြတ်လမ်းကိုနှိပ်ပြီးလျှင် Desktop ပေါ်တွင်ဖိုင်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိမ့်မည် မျက်နှာပြင်အပြည့်အစုံနှင့်အတူ
OS X မျက်နှာပြင်၏သီးခြားနေရာတစ်ခုကိုဖမ်းယူပါ
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် မျက်နှာပြင်၏တိကျသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၏ဖန်သားပြင်ကိုယူပါနှိပ်ရမည့်သော့များပေါင်းစပ်ခြင်းသည်ယခင်နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၃ အစားနံပါတ် ၄ ကိုနှိပ်ပါလိမ့်မည်။
Command (cmd) + shift key (Shift) + 4
ထိုခလုတ်များကိုသင်၏ကီးဘုတ်ပေါ်တွင်တစ်ချိန်တည်းနှိပ်ပြီးနောက်သင်သည် cursor သည်ပြောင်းလဲပြီးကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည် အဆိုပါ interface ကို၏တိကျသောareaရိယာကိုရွေးပါ ကျွန်တော်စခရင်ရိုက်ချင်တာပါ။
ဒီ option ၏အသေးစိတ်အချို့သောဖြစ်ပါတယ် ဖမ်းယူရမည့် pixel များ၏အရွယ်အစားကိုညွှန်ပြသောနံပါတ်များ မျက်နှာပြင်။
လည်းရှိပါတယ် ဒီ mode မှာအခြားအေးမြလှည့်ကွက် မျက်နှာပြင်ကိုဖမ်းယူရန် -
Space key ကိုနှိပ်လျှင်aပွင့်လင်းဝင်းဒိုးကိုသို့မဟုတ် application ကိုဖမ်းယူနောက်ဆုံးရုပ်ပုံဖမ်းယူရေးဖိုင်တွင်၎င်း၏မျက်နှာပြင်ပတ်လည်တွင်အရိပ်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးသည်။
shift key ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်, ကျနော်တို့ဒေါင်လိုက်သို့မဟုတ်အလျားလိုက်လှုပ်ရှားမှုပိတ်ဆို့ပါလိမ့်မယ် cursor ရွေ့လျားသောအခါ။
OS X တွင်ပြတင်းပေါက်တစ်ခုကိုဖမ်းယူပါ
ကျနော်တို့ယခင်အမှု၌ဖော်ပြခဲ့ကြပေမယ့်ကျနော်တို့ပိုကောင်းရှင်းပြပါလိမ့်မယ် Mac ပေါ်ရှိသီးခြားပြတင်းပေါက်တစ်ခုအားမည်သို့ရိုက်ကူးရမည်နည်း။ ပထမဆုံးအနေနဲ့၊ ပုံနှိပ်ခြင်းမျက်နှာပြင်ကိုသက်ဝင်စေဖို့အောက်ပါခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
mouse cursor သည်အသွင်ပြောင်းသောအခါ space key ကို နှိပ်၍ ယခုမြင်ရလိမ့်မည် ၎င်း၏ပုံသဏ္aာန်ကင်မရာ၏ပုံဖြစ်လာသည် ဓာတ်ပုံများ။ ယခုတွင်ရွေးစရာနှစ်ခုရှိသည်။
mouse ကို cursor ကိုပြတင်းပေါက်ပေါ်တွင်ထားပါ ကျွန်တော်တို့ screenshot ရချင်တယ်။ ထည့်ပြီးတာနဲ့ Magic Mouse ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး screenshot ပါတဲ့ဖိုင်ဟာသင့် desktop ပေါ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့နောင်တရလျှင် Escape ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ပြီးတော့ ၀ င်းဒိုးကိုမထုတ်ချင်ဘူး
သငျသညျဖြစ်ပါတယ်လိုချင်တာတွေပါလျှင် တစ် ဦး timer နေရာမှာဖမ်းယူယူပါအဲဒါလည်းဖြစ်နိုင်တယ် Applications> Utilities တွင်တွေ့ရမည့် "Snapshot" application ကိုဖွင့်ရမည်။
မီနူးရဲ့ထိပ်မှာ "Capture" option ထဲမှာ timer တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်ရွေးစရာရှိတယ်ဆိုတာသင်တွေ့လိမ့်မယ်။ ဤကိစ္စတွင်အချိန်သတ်မှတ်ထားသည် စခရင်ရိုက်ကူးရန် ၁၀ စက္ကန့် အဆိုပါ interface ကို၏။
Mac ပေါ်ရှိ screenshots များနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်နောက်ထပ်အရာများ
ဖမ်းယူအားလုံးသည်အတူတူပင်သိမ်းဆည်းထားသည် တည်နေရာ အရာ desktop ပေါ်မှာဖြစ်ပြီး format ချပြီး .png ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် keystroke ကို key ပေါင်းစပ်သုံးခုထဲသို့ထည့်ပါက ctrl +, ရလဒ်ရလဒ် desktop ပေါ်မှာသိမ်းဆည်းထားမည်မဟုတ်ပေမယ့်ကူးယူလိမ့်မည် ကွမ်းခြံကုန်း လိုအပ်သည့်နေရာတွင်တိုက်ရိုက်ကပ်ထားရန်။
ယခုအချိန်ထိအရာရာတိုင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်။ သို့သော် အကယ်၍ ဤဖမ်းယူချက်များကိုရယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောအမြန်နှုန်းဖြစ်သည်ဟူသောအတွေးမှစပါက desktop နှင့်အထက်တွင် .png format ဖြင့်သိမ်းဆည်းသောအခါ၎င်းသည်ထိရောက်မှုဆုံးရှုံးသည်။ အများဆုံးသောအရာမှာဆရာများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့လိုအပ်သည် .jpg သို့မဟုတ်ပင် format နဲ့ .pdf သူတို့တစ်တွေသတ်သတ်မှတ်မှတ်နေရာတစ်ခုမှာသိမ်းထားတာဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ ဤကိစ္စသည်သင်၏ကိစ္စဖြစ်ပါကကျွန်ုပ်တို့တွင်အဖြေတစ်ခုရှိသည်၊ ဤတစ်ကြိမ်တွင်စနစ်ကပေးအပ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအလွန်အသုံး ၀ င်ပြီးအခမဲ့အသုံးပြုသော application မှတစ်ဆင့်ပေးသည်။ Screenie ကိုသိမ်းပါ.
ဒါကြောင့်သင်လုပ်နိုင်သည်နှင့်အတူ အပြုအမူကိုပြုပြင်မွမ်းမံပါ သင်၏စိတ်ကူးတွင် OSX screen capture utility ၏ရှိပြီး၎င်းသည် autosave format၊ တည်နေရာနှင့်ယေဘူယျအမည်များကိုပင်ပြောင်းလဲရန်ခွင့်ပြုထားသောကြောင့်အလွန်မြန်ဆန်သော tool ကို ultra-fast အဖြစ်ပြောင်းပါ။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်တို့အလိုရှိတိုင်း system ရဲ့ default configuration ကိုပြန်သွားနိုင်ပါတယ်။
ထိုအခါငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူထားခဲ့ပါ OS X တွင်ဤအသုံးအဆောင်၏နောက်ထပ်လှည့်ကွက်များ နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေဤမျှလောက်များစွာသောကမ်းလှမ်း:
ဤပို့စ်၏အားသာချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့မည်သို့တတ်နိုင်သည်ကိုပြောပြရန် screenshots များသို့ ဦး တည်သည် အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများပေါ်တွင်ဖန်သားပြင်တစ်ခုရယူပါ:
Apple Watch တွင် screenshots များကိုယူပါ
သင်၏ iOS ကိရိယာတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာများကိုဗီဒီယိုပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ပါ
Mac တီထွင်မှုတစ်ခုမှ Apple TV တွင်ပုံကိုဖမ်းယူပုံ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » Mac ပေါ်မှာ screenshots တွေဘယ်လိုယူမလဲ
ဟိုဆေးလူးဝစ္စ Colmena ဟုသူကပြောသည်
Mac ပေါ်မှာစဖွင့်တဲ့သူတိုင်းအတွက် screenshots တွေရဲ့အရေးကြီးပုံကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီး ၆ လအကြာမှာသူတို့ကဘာကြောင့် Mac ကိုစွန့်ခွာမသွားရတာလဲလို့မေးပြီး "ငါ screenshots တွေမပါပဲငါမနေနိုင်ဘူး" လို့ပြောတယ်
ကျွန်ုပ်တွင် "ဖမ်းယူခြင်း" ဟုခေါ်သည့်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုနှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအတွက်တစ်ခုရှိသည်၊ လက်ရှိ ၂၀၁၃ တွင်ဖမ်းယူနိုင်မှု ၃၀၀ နီးပါးရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့ကို JPGs များအဖြစ်ပြောင်းလဲပြီး၊ မည်သည့်ကွန်ပျူတာမှ Mac ဖြစ်စေမဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းကိုသီးသန့် FTP server သို့ upload ပြုလုပ်သည်။
FaceBook မှာသူငယ်ချင်းတောင်းဆိုခိုင်းလား။ ရက်စွဲ / အချိန်နှင့်ရိုက်ယူပြီးထုတ်ယူပါ။ စ
Jose Luis Colmena ကိုပြန်ပြောပါ
Pedro Rodas ဟုသူကပြောသည်
Pedro Rodas အားပြန်ပြောပါ
Savescreenie ပရိုဂရမ်နဲ့မင်းရဲ့ဖမ်းယူမှုတွေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်လိမ့်မယ်လို့ငါမျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
trackpad နဲ့စခရင်ရိုက်ကူးလို့မရပါဘူး update မလုပ်ခင်ကျွန်တော် command သုံးပြီး shift key ပေါင်းနံပါတ် ၄ နှင့် trackpad ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါလျှင်ယခုကျွန်ုပ်သည်တစ်ချက်နှိပ်ပါ၊ နှစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ငါကမောက်စ်ဖြင့်သာလုပ်နိုင်ပြီးတကယ်တော့ငါကကြောင်တစ်ကောင်မဟုတ်ဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်ငါ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
Apple Watch ကိုအိန္ဒိယမှာရောင်းပြီးပြီ
ဇာတိနှင့် Apple မှမဟုတ်သော Apple Watch applications များအကြားခြားနားချက်များကိုစစ်ဆေးပါ